Agba agba etemeete ise kacha mma maka anya aja aja - Ịma Mma
Agba agba etemeete ise kacha mma maka anya aja aja
Anyị ekweghị na mma nkọwa ma ọ bụ 'iwu' gburugburu akụkụ ndị a. Mana mgbe ọ na -abịa n'ịgba ụcha anya gị, ụfọdụ ihe na -eme na wheel wheel na -enye aka n'ezie. Were agba aja aja: Mgbe ejikọtara ya na ndo anya kacha mma maka anya aja aja, ị nwere ike wepụta omimi na akụkụ dị ka whoa. Anyị kụrụ onye na -ese etemeete Vanessa Ungaro nke Lauren + Vanessa ịkekọrịta ụdị agba etemeete na -ewepụta akụkụ kachasị dị egwu na ụdị agba aja aja ọ bụla. Gụkwuo ka ịchọta ndò etemeete kacha mma maka agba anya gị. (Ma pssst ... ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmata ma ọ bụ gbadata ebe a na mberede, anyị chọpụtakwara agba etemeete ise kacha mma maka anya na -acha anụnụ anụnụ na Ditto maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ .)
Agba etemeete kacha mma maka anya aja aja: Eyeshadow na -ekpo ọkụ nchara
Aghụghọ maka ịkwalite anya aja aja bụ ibu ụzọ mata ụdị ụcha gị nwere. Ungaro kwuru, 'Otu n'ime ihe nzuzo kacha mma nke ndị na -ese ihe etemeete na -ejigide onyinyo aja aja na -acha ọkụ na eriri ọla kọpa n'elu ahịrị adịghị mma ga -eweta ọkụ na -acha ọkụ na ọla edo na anya aja aja. Ihe atụ nke ọbara ọbara na ndò ga -adị iche na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ọla edo ọ bụla, na -eme ka ha yie ihe dị egwu. Maka ile anya siri ike karị, Ungaro na -atụ aro iji ihe mkpuchi ojii jetu nku anya iji tinye omimi.
Onyinyo a na-acha uhie uhie na-abịa na palette na-ahazi agba, yabụ ị nwere ike iji ndò agba aja ọ bụla jiri ngwa etemeete ọ bụla gwuo egwu.
L'Oréal Paris Agba Riche Shadow Quad n'ime n'ihi na m kwesịrị ya , $ 7, ụlọ ahịa ọgwụ.com
Onyinyo a nwere agba nwere ọmarịcha ifuru na -enwu n'ime ya maka inwe mmetụta na -enwu enwu.
Nars Shimmer Eyeshadow na Lola Lola , $ 25, narscosmetics.com
Site na ngwụcha dị nro, matte, ụda olu a na -acha uhie uhie nwere ike ime ka ndo ọ bụla nke anya aja aja pụta.
Clinique Ihe niile gbasara onyinyo nke otu n'ime cherry kpuchie chocolate , $ 16, clinique.com
Foto Getty 5/21
Agba agba etemeete kacha mma maka anya agba aja aja: acha anya na -acha odo odo
Ungaro kwuru, sị, '' Agba niile na -acha odo odo, site na eggplant ruo lavender, na -arụ ọrụ na anya aja aja n'ihi na ọ na -ewepụta agba agba aja aja n'eziokwu. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ịdị nro dị nro nke odo odo nwere ike ime ka ọcha anya gị yie nke ọma, na -eme ka ị na -amụ anya.
Hichaa ndò etiti n'etiti mkpuchi gị, ala aka ekpe na -acha odo odo n'akụkụ eriri ahụ, na piom aka nri ala dị n'akụkụ nkuku na ahịrị adịghị ala iji mee ka anya gị gbapụta.
Paịlị Dior 5 Couleurs Eyeshadow na Victoire , $ 62, dior.com
Mee Up For Ever 7/21
Ọ na -ele anya nke ọma na pan, mana enwere ike ịgwakọta onyinyo anya a ka ọ bụrụ agba na -achaghị acha, yabụ ị nwere ike họrọ oke ike ị masịrị.
Mee elu ruo mgbe ebighị ebi anya onyinyo na eggplant , $ 21, makeupforever.com
Tee akọrọ ma ọ bụ jiri ahịhịa dị nro mee ka nku anya anya a yie nke ọma karịa akpụkpọ ahụ gị.
Chanel Ombre Essentielle Soft Touch Eyeshadow na Pulsion , $ 30, chanel.com
Foto Getty 9/21
Agba kacha mma maka anya agba aja aja: Eyeliner miri emi
Ọla bụ otu n'ime ihe na -agbanwe agbanwe mgbe ọ na -abịa etemeete anya, mana Ungaro kwuru na ọ na -enwu enwu karịa na anya aja aja na -agabeghị oke. 'Sụọ ihe mkpuchi ọla kọpa gbara anya gburugburu anya gị site na ahịrị adịghị elu ruo na ala maka mmetụta miri emi,' 'ọ na -ekwu. Maka nsonaazụ dị mma karịa, nwalee eriri ọla nke nwere ntakịrị nkọ na ya - ọ ga -eju gị anya etu ndò a na -ekpo ọkụ nwere ike isi gbanwee ọdịdị gị niile.
Nke a 2-in-1 Lancôme eyeliner nwere njedebe nwere ụfụfụ iji mee ka anya gị mezie ngwa ngwa maka ile anya.
Lancome Le Stylo Eyeliner na -adị ogologo mmiri na -enweghị mmiri na ọla ọla , $ 27, lancome-usa.com
eziokwu winona ryder na -ata ntutu
Mee ka ike nke ihe ọla kọpa sie ike site na ijikọ ya na onyinyo ude na -ahazi.
Mma mma ọrụ Tarte ugboro abụọ Onye na -ahụ maka anya anya mechiri emechi na ndo na ọla , $ 24, ulta.com
Eyeliner kachasị amasị òtù nzuzo a na-efegharị ngwa ngwa wee nọrọ ruo ọtụtụ awa, na-eme ka ọ bụrụ nke zuru oke maka idobe eriri mmiri gị.
Stila Smudge Stick Waterproof Eyeliner na Lionfish , $ 22, ulta.com
Agba agba etemeete kacha mma maka anya aja aja: Eyeliner Teal Metallic
Maka nnukwu mmetụta dị iche na anya na -adaba na njedebe gbara ọchịchịrị nke ụdị agba dị iche iche, Ungaro na -atụ aro iji eyeliner ọla. Ọ na -akọwa, 'Itinye eyeliner teal na mmiri mmiri ala nke anya gị na mkpuchi mkpuchi ojii ole na ole na -enye anya aja aja anya dị egwu,' ka ọ na -akọwa. Naanị jide n'aka zere mmejọ eyeliner asaa a oge ọzọ ị ga -anwale ya.
Hụ anya Nyong'o n'anya? Ozi ọma. Nke a bụ kpọmkwem eyeliner o yi na foto gara aga. Ọ bụ usoro mmiri mmiri na onye na-etinye ụfụfụ nwere ọmarịcha na-eme ka ọ dị mfe ịnweta ahịrị nke kacha dị mma.
Lancome Artliner 24H Liquid Lier na Turquoise , $ 31, lancome-usa.com
Nbibi obodo 15/21
Dị ka aha onye nku anya a na -egosi, ị nwere ike iyi ya ụbọchị niile - na abalị - na -enweghị atụ ụjọ mbibi etemeete.
Mbibi obodo mepere emepe 24/7 Glide-On Pen Pen na Junkie , $ 20, urbandecay.com
Yiri mmapụta ya n'akụkụ ahịrị adịghị elu gị, ma ọ bụ jikọta ya na mkpuchi gị site na iji ọnụ smudger maka anya siri ike.
Mkpokọta QueenGirl Queen nwere mmetụta mmetụta anya doro anya na Jade , $ 5, covergirl.com
Agba etemeete kacha mma maka anya aja aja: Onyunyo nke ude ọla edo
Ungaro kwuru, sị: 'Ọla kọpa na -ewetara anya nchara nchara, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha nwere ụda ọla edo. Site n'iji ọla nchara ma ọ bụ champeenu nwere ụda edo edo, ị ga -ewepụta ntakịrị ntakịrị ihe ngosi hazel na anya aja aja, na -eme ka ha yie ihe dị egwu.
Anyị hụrụ ite ite agba MAC n'ihi na ha adịghị mfe itinye. Jiri mkpịsị aka gị were mịfe ha n'elu mkpuchi gị, ihe mkpuchi anya anya iji kpuchie ya na ndo ndị ọzọ, ma ọ bụ ahịhịa liner nwere ihu iji yikwasị ya n'akụkụ mmiri mmiri gị.
Ite ite ite MAC Pro Longwood na Indianwood , $ 22, maccosmetics.com
Aha ahụ kwuru ya niile. Ozugbo usoro amber-gold yi mkpuchi anya gị, a ga-ahapụ gị ụgwọ dị elu nke na-enye ìhè n'akụkụ niile.
Anya Charlotte Tilbury nke Mesmerise Ude Eyeshadow na Bette , $ 32, charlottetilbury.com
Ịgbagharị Mma 20/21
Onye na-achọ ka ọ dị mfe imegharị na-enye gị ohere itinye onyinyo ude a dị ka agba anya niile ma ọ bụ nku anya, dabere na ọnọdụ gị.
Na -agbagharị Mma na -enwe ọmarịcha anya mmiri mmiri na ọla , $ 26, wanderbeauty.com
Kpado maka Oge ọzọ!
dyson draya ntutu vs airwrap
ihe a na -ahụta nwa eke na egwurugwu
elu bikini ruffle n'elu